Paompy syringe mitarika fluid ho an'ny elektrospinning ary inona no ampiasaina amin'ny elektrospinning
Inona no atao hoe electrospinning? Electrospinning dia teknika tsotra sy marobe amin'ny fanomanana nanomaterial, izay miankina amin'ny fandotoana elektrostatika eo anelanelan'ny fiampangana ny tany mba hahazoana nanofibers mitohy avy amin'ny ranoka viscoelastic. Amin'izao fotoana izao, fitaovana marobe isan-karazany nanomana soa aman-tsara nanofi ...
Paompy Peristaltika mamoaka ranoka ho an'ny fermentation sy Bioreacor
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-05-22
Ny fermentation dia manondro ny fizotran'ny olona manomana sela bitika mikraoba na metabolite mivantana na metabolite faharoa amin'ny alàlan'ny hetsika ataon'ny zavamiaina bitika eo ambanin'ny fepetra aerobika na anaerobika. Ny fermentation dia karazana fanehoan-kevitra biokimika izay iharan'ny olombelona ...
Ny fampiharana paompy Peristaltika amin'ny fitsaboana rano maloto
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fandrosoan'ny indostrialy sy ny tanàn-dehibe dia nitombo haingana ny toekarena ara-tsosialy, saingy ny olana momba ny fandotoana taty aoriana dia nanjary olana lehibe mila vahana haingana. Ny fitsaboana ny rano maloto dia nanjary tena ilaina amin'ny ekonomia ...
Ny fampiharana ny paompy peristaltika ranoka mitarika amin'ny paompy indostrian'ny fambolena
Lead Fluid peristaltic pumps dia be mpampiasa amin'ny fambolena, bioteknolojia, filtration, simika, tontolo iainana sns sns Teknolojia coating voa dia iray amin'ireo be mpampiasa amin'ny sehatry ny fambolena. Recommended Products 1 Recommended Lead fluid fluide BT301L fantsom-pandrefesana peristaltika mikoriana: 0,006 ...
WT300F-D Paompy Peristaltika avo lenta, paompy famenoana ranon-javatra avy amin'ny tsiranoka mitarika
Paompy famenoana avo lenta, paompy fluid fluide avy amin'ny fluid fluid. Ny famenoana ranon-javatra marina dia zava-dehibe amin'ny biofarmaceutika, fitsaboana, andrana, sakafo ary indostria. Ny indostrian'ny biofarmasy, ny medika, ny sakafo dia manana fepetra avo lenta, ambany fihenam-bidy ary fahombiazana avo lenta ...
Inona no azon'ny paompy peristaltika mitarika fluide hamantatra ny asidra nuleika?
Inona no azon'ny paompy peristaltika mitarika fluide hamantatra ny asidra nuleika? Mbola mafy ny toe-javatra misy ny valan'aretina COVID-19 ankehitriny, toerana maro no nanitatra ny fizahana ny andrana asidra niokrika mba hiatrehana ireo asa fisorohana ny fiverenan'ny tany ary firenena maro manerantany no manatsara ny dev ...
Ahoana ny fametrahana ny tahan'ny fivezivezin'ny paompy peristaltika fluid
Ahoana ny fomba hametrahana ny tahan'ny fandehanan'ny paikady peristaltika ranoka ao anaty lahatsoratra teo aloha, nifanakalo hevitra momba ny fomba fikajiana ny onja amin'ny paompy peristaltika isika. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantarinay ny fomba hametrahana ny tahan'ny fikorianan'ny fluid fluid ...
Paompy Peristaltika mamoaka ranoka mety amin'ny indostrian'ny fanafody
Paompy Peristaltika Fluida mitarika mety ho an'ny indostrian'ny pharmaceutika Pistes peristaltic fluide dia manana halaviran-doha maro karazana izay afaka mifanaraka amin'ny famenoana ranon-javatra miaraka amin'ny taha hafa. Ataovy azo antoka ny fiasana maina, ny vidin'ny fikolokoloana ambany, re ...